Laba arrimood oo taariikhda u geli doona Farmaajo hadii sida lagu heshiiyay ay doorashadu u dhacdo | Somsoon
Home WARAR Laba arrimood oo taariikhda u geli doona Farmaajo hadii sida lagu heshiiyay...
Laba arrimood oo taariikhda u geli doona Farmaajo hadii sida lagu heshiiyay ay doorashadu u dhacdo
8-da bisha Febraayo ee sanadka 2021-ka waxaa lagu balansanyahay in baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya uu soo doorto madaxweynaha dalka hoggaamin doona afarta sano ee soo socota, oo ka bilaabaneysa maalinkaas.
Jadwalkaas ayaa dhigaya in doorashada madaxweynaha Soomaaliya ay dhacdo 8-da bisha Febraayo ee sanadka soo socda oo haatan ay ka harsantahay 123 maalmood.
Hadii sidaas uu ku dhaqan-galo jadwalkaas, madaxweyne Farmaajo waxa uu noqon doonaa madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliya soo mara oo doorashada dalka waqtigeeda ku qabta, isagoo aan maalina ku darsan.
Sidoo kale hadii dib loo soo doorto madaxweyne Farmaajo, maadaama la aaminsanyahay in mar labaad uu isisoo sharixi doono, waxa uu noqon doonaa madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed oo dib loo soo doorto.
Hoos ka eeg jadwalka
Article horeDF oo beenisay in Al-Shabaab sii daayeen dhakhaatiirtii reer Cuba
Article socoda RW Rooble oo magacaabay guddiga qaban-qaabada aaska Qaran ee Cali Khaliif